सामाजिक सद्भावका लागि मैत्रीपूर्ण फुटबल सम्पन्न – NQKhabar
प्रकाशित मिति: २४ कार्तिक २०७४, शुक्रबार १२:२८
सोम गुरुङ बाँके २४ कार्तिक / बाँकेको डुुडुुवा गाउँपालिका वडा नं. ६, हिरमिनियामा सामाजिक सदभावका लागि मैत्रीपुर्ण फुटवल खेल आज सम्पन्न भएको छ । यूएनडिपीको सहयोग तथा प्रवद्र्धनमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले फुटबल खेल २०७४ को आयोजना गरीएको हो । हिरिमिनियाको भगंघोटनास्थित सरस्वती माविको खेल मैदानमा गरिएको सामाजिक सदभाव अभियान मेलका लागि खेलमा सामाजिक समुह विजयी भएको छ । सदभाव समूहले ४ गोल र सामाजिक समूहले ६ गोल गरेको थियो । कार्यमा जित हार भन्दा पनि साामाजिक सदभावको सन्देश प्रवाहका लागि सामाजिक र सदभाव दुई वटा समुह बनाई खेल खेलाइएको थियो ।
खेलमा हिन्दु, मुस्लिम, सिख्ख र क्रियश्चियन लगायत विभिन्न धर्मका युवाहरुको दुई समुहका युवाहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वयन समितिका संयोजक अजय कुुमार श्रीवास्तव, नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्य, कानून पत्रकार समाजका अध्यक्ष लोकबहादुर शाह, जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष उदयराज बर्मा, डुडुवा गाउँपालिकाका ६ नं. वडा अध्यक्ष मोहन मिश्र, नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष प्रल्हाद बहादुुर कार्की, सम्वाद समुुह, बाँकेका संयोजक शुुक्रऋषि चौलागाई लगायतले खेलाडीहरुलाई मेडल र प्रमाण पत्र वितरण गर्नुभएको थियो ।
खेलको माध्यमले समुदायमा दिगो शान्तिको स्थापनाको सन्देश र सामाजमा आपसी मेलमिलाप सदभावको बाताबरण कायम गर्न खेलको आयोजना गरिएको हो । हिरिमिनिया क्षेत्र बहुधार्मिक क्षेत्र भएकाले त्यहाँबाट सदभावको अभियान शुरुवात गरिएको केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीले बताउनुभयो ।